प्रभु बैंक : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, १६ माघ २०७५)
यस बैंकले शेयरधनी लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनका लागि ५ दशमलव २६३ प्रतिशत नगद लाभांश प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । पुस २२ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र आगामी साधारणसभाबाट पारित भएपछि लगानीकर्ताले उक्त लाभांश पाउनेछन् ।
हालसम्म बैंकले अघिल्लो प्रगतिबारे कुनै सूचना दिएको छैन । गतवर्ष ४० प्रतिशत हकप्रद जारी गरी पुँजीवृद्धि गरेको बैंकले यस वर्ष पनि पूँजी बढाउने उद्देश्यस्वरूप लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । हाल बैंकको चुक्तापूँजी रू. ८ अर्ब २३ करोड ३९ लाख ५९ हजार छ । प्रस्तावित बोनस शेयर वितरण गरेपछि चुक्तापूँजी रू. ८ अर्ब ६४ करोड ५६ लाख ५६ हजार पुग्नेछ । बिहीवार दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेकै दिन धेरै कारोबार गर्ने दश कम्पनीमध्ये प्रभु बैंक पनि परेको छ । यस दिन कम्पनीको रू. १ करोड ५५ लाखभन्दा बढीको कारोबार भएको छ ।
2019-01-30 - 143 view(s) - abhiyan